मलमास सकिदै : नित्यकर्म र नैमित्यसँगै काम्यक सबै कर्म गर्न मिल्ने – Todays Nepal
धर्मशास्त्रीय मान्यताअनुसार अशुद्ध महिना मानिने मलमास म‌ंगलबारदेखि सकिदैैछ । मलमास अर्थात अधिकमास जेठ ३० गते बुधबार राति २ बजेसम्म रहन्छ । गएको जेठ १ गतेदेखि सुरु मलमास आज सकिन लागेको हो ।
गएको जेठ १ गते बेलुका ५ बजेर ५३ मिनेटसम्म औशी तिथी रहेको र त्यसपछि अधिक जेष्ठ शुक्लपक्ष सुरु भएको नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले बताए ।
अन्य महिनामा २ पक्ष मात्र भएपनि मलमास अवधिभर ४ पक्ष रहन्छ । यो अवधिमा अधिक जेष्ठ शुक्ल पक्ष, शुद्ध जेष्ठ शुक्ल पक्ष, शुद्ध जेष्ठ कृष्ण पक्ष र अधिक जेष्ठ कृष्ण पक्ष गरी ४ पक्ष हुन्छ ।
नित्यकर्म र नैमित्य कर्मसँगै अब मलमास सकिएकाले काम्यक कर्म पनि गर्न मिल्ने प्रा. डा. गौतमले स्पष्ट पारे ।
मलमासमा कामना गरेर गर्ने विबाह, ब्रतबन्ध, रुद्री, सप्ताह गर्ने , गृह प्रवेश गर्ने लगायतका काम्यक कर्म गर्न नहुने पण्डित माधव प्रसाद शर्माले बताए ।
यो समयमा कहिल्यै नगएका मन्दिरमा जान नहुने र तिर्थाटन गर्न नहुने पनि उनले बताए । यसो गरेमा अशुभ फल प्राप्त हुनेछ ।
काम्यक कर्म अर्न्तगत पोखरी खन्ने, इनार खन्ने जस्ता कार्य पनि गर्न हुदैन । दैनिक रूपमा गरिने स्नान, ध्यान, सन्ध्या, तुलसी पुजा, हवन, दुर्गा पुजा लगायतका नित्य कर्म गर्न मलमासको समयमा मिल्छ । यसैगरी, अकस्मात आइपर्ने मृत्युका काज किरिया कर्म, न्वारन जस्ता नैमित्य कर्म गर्न पनि कुनै छेकथुन नहुने अध्यक्ष गौतमले बताएका छन् ।
गौतमका अनुसार सौर्यमान र चन्द्रमानबीच हुने अन्तरका कारण प्रत्येक ३२ महिना १६ दिन ४ घडी पछि मलमास पर्छ । सौर्यमानअन्तर्गत ३६५ दिनको एक वर्ष र चन्द्रमान अन्तर्गत ३५४ दिनको एक वर्ष हुने भएकाले प्रत्येक १२ महिनामा ११ दिनको अन्तर पर्नेे उनले बताए ।
मलमासमा भगवान् नारायणको पूजा, पुरुषोत्तम महात्म्य सुन्ने र दान गर्ने परम्परा छ । भगवान् नारायणको पूजा आराधना गर्नाले सम्पूर्ण पाप नष्ट हुन्छन् भन्ने धर्मग्रन्थहरूमा उल्लेख छ ।
कीर्तिपुरको मच्छेगाउ र चांगुनारायणको मच्छेनारायणमा मलमासमा जेठ २ गतेदेखिसुरु एक महिने मेला पनि सकिदैछ ।
हरेक ३२ महिनामा आउने अधिकमासमा मच्छेगाउमा रहेको मच्छेनारायणमा मेला लाग्ने गरेको छ । १० लाख भन्दा बढीले मेलाको अबलोकन गरेको मेला समितिले जनाएको छ ।
माछाको मुखबाट निस्केका नारायणको दर्शनका लागि थुप्रै भक्तजनको भिड लागेको थियो ।-हाम्रो कुरा बाट